Muri pano: musha / System Admin / Windows / Nzira yekukiya Microsoft Edge nePassword Dziviriro
Vanhu vazhinji vatanga kushandisa Microsoft Edge seye yavo yekutanga browser paPC. Sezvo bhurawuza iri paunenge uine ese mapassword ako akachengetedzwa uye wakapinda mumawebhusaiti akawanda, kusanganisira vezvenhau, zvakakosha kuti uzvidzivirire kubva kune zvisiri pamutemo kuwana. Kana iwe uchida kuchengetedza yako yakavanzika yedata, zvinokurudzirwa kuchengetedza iyo browser ne password. Pazasi pemabatiro aungaita kukiya Microsoft Edge nekuchengetedza password paPC yako.
Zvakare, verenga | Maitiro Ekugonesa Kurara Tabs muMicrosoft Edge
Chengetedza Microsoft Edge nePassword Dziviriro
Kana iwe ukagovana komputa yako neshamwari dzako uye nemhuri, ivo vanogona kuwana nyore nyore yako yekuvhura nhoroondo yeEdge, mabhukumaki uye zvakare kuvhura iwo mawebhusaiti iwe pawakapinda mukati. Izvi zvinogona kupa kutyisidzira kwakakomba kune chako wega kana mumwe munhu akavhura midhiya enhau kana gore yekuchengetedza webhusaiti kwaunenge watopinda.
Saka, zvinogara zvirinani kukiya Edge ne password. Tevedza nhanho dziri pazasi kuchengetedza Microsoft Edge browser pamwe nekudzivirira kwepassword pakombuta yako.
Vhura iyo Microsoft Edge browser pakombuta yako.
Shanyira Bhurawuza Lock kuwedzerwa paEdge Wedzera-ons Chitoro.
Pano, tinya tora. Wobva wadzvanya Wedzera Kuwedzeredza apo inokurudzirwa.
Kamwe yaiswa, zvinongoerekana zvaita kuti iwe ukiye browser.
Click on Ehe.
Zvino, seta nyowani nyowani yeEdge browser. isa yako email kero.
Kamwe pawakagadzwa, iwe unozodzoreredzwa kune iyo Bhurawuza Lock marongero peji. Zvakare, iwe unogona kuwedzera Yakadzika Kuchengetedza iyo inokiya bhurawuza kwemaminetsi matatu mushure mematatu ekuedza kuyedza. Iwe unogona zvakare kuseta sarudzo kuti ubvise yako browser browser nhoroondo otomatiki.
Iye zvino, vhara Edge uye uvhure zvakare kuti uone kana password yekuvhara iri kushanda. Sezvo iwe uchivhura Edge, Browser Lock inotora pamusoro pekutonga uye nekukubvunza iwe password. Ita shuwa iyo Browser Lock yekuwedzera yeiyo incognito modhi mumasisitimu eMicrosoft Edge ekuchengetedza zvakanyanya.
Iyi yaive gwara rinokurumidza rekuti ungakiya sei Microsoft Edge browser nekuchengetedza password. Chiedze uye undizivise kana zvichikushandira zvakanaka. Kana iyo Browser Lock isingashande nemazvo, unogona kuyedza zvimwe zvakafanana zvinowedzera kubva kuAdd-ons chitoro. Ramba wakashongedzerwa zvimwe zvinyorwa zvakadaro.
Best VPNs for Microsoft Edge mu 2018
Top 10 Best Applock yeIndaneti mu2017
Filed Under: Windows Tagged With: Kukiya (sainzi yekombuta), Microsoft Edge, Pasiwedhi, Web browser